मनोरञ्जन – Nayadhar
पाल्पा । राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरीगीत प्रतिष्ठान जिल्ला शाखा पाल्पाका अध्यक्ष रेखा विष्ट वडा सदस्यमा विजयी भएकी छिन् । तानसेन नगरपालिका –६ निवासी विष्ट सोही वडाको वडासदस्यमा विजयी भएकी हुन् । गठबन्धनको तर्फवाट खुल्ला वडा सदस्यमा उमेदवारी दिएकी विष्ट विजयी भएकी हुन् । रेखाले आफू वडा सदस्यमा विजयी भएसँगै आफूलाई भोट दिने वडावासीहरुप्रति आभार व्यक्त गरेकी छिन् । उनले जनताले दर्शाएको विश्वासलाई सम्मान गर्दै गाउँ टोल नगरका समाजको विकास र रुपान्तरणका लागी सक्रिय रुपमा काम गर्ने...
पाल्पा । शुक्रबार हुने स्थानीय तह निर्वाचनमा मतदान गर्नका लागि अभिनेता धिरेन शाक्य पाल्पामा छन् । केही दिनअघि नै आफ्नो गृहजिल्ला पाल्पा आएका उनी अझै एक साता पाल्पामै रहनेछन् । नेपाली चलचित्रमा कुनै समयका निकै चर्चित यी अभिनेताले तानसेन नगरपालिका –३ भगवतीटोलबाट मतदान गर्नेछन् । वडा नं. ३ को मतदान केन्द्र बालमन्दिर हो । मतदानका लागि निकै उत्साहित देखिएका उनले नयाँधारसँग भने, ‘अब मतदान सकेर पनि एक सातापछि मात्रै काठमाडौं फर्किनेछु ।’
काठमाडौं । गायक पुरुषोत्तम गैरेले पञ्चेबाजा गीत सार्वजनिक गरेका छन् । नयाँ वर्षको अवसर पारेर गायक गैरेले ‘सिन्दुरको धर्काले’ बोलको पञ्चेबाजा गीत सार्वजनिक गरेका हुन् । यो गीतमा पुरुषोत्तमसँगै गीताञ्जली योगीले स्वर दिएकी छन् । गायक गैरेकै शब्द एवं संगीत रहेको गीतलाई कृष्ण बि.केले एरेन्ज गरेका हुन् । राजेन्द्र बस्याल (राजु)को निर्देशनमा तयार भिडियोमा कामना न्यौपाने, गोकुल खनाल, राज थापा, सुरज बस्याल, राजु बस्याल, सिर्जना मश्राङ्गी, अञ्जली बस्याल, प्रमिशा बस्याल लगायतको अभ...
पाल्पा । पाल्पा जिल्लासँग अनेक विशेषताहरु जोडिएका छन् । ति विशेषतामा थुप्रै गीतहरु समेत बनेका छन् । पछिल्लो समय पनि त्यस्तै विशेषतासँग जोडेर एउटा गीत बनेको छ, ‘पाल्पाको चुकाउनी’ । पाल्पाली ब्राण्ड नै मानिन्छ चुकाउनी । पाल्पाको चुकाउनीले जिल्लामा मात्रै नभएर देशमै प्रसिद्धी कमाएको छ । जिल्ला घुम्न गएकाहरु प्रायहरु पनि पाल्पाको चुकाउनीको स्वाद लिएर फर्किने गरेका छन् । पाल्पाको ब्राण्ड मानिने सोही चुकाउनीलाई लिएर ‘पाल्पाको चुकाउनी’बोलको लोकदोहोरी गीत बनेको हो । नयाँ वर्ष २...
काठमाडौं । लोकप्रिय गायक प्रमोद खरेलको स्वरमा नयाँ गीत सार्वजनिक गरिएको छ । थुप्रै हिट गीत दिएका गीतकार, संगीतकार एवं एरेन्जर विशाल निरौलाको शब्द, संगीत एवं एरेन्जमा प्रमोदले ‘मुटु चिनेर’बोलको गीतमा स्वर दिएका हुन् । सेन्टिमेन्टल खालको यो गीत आज अर्थात मंगलबारमात्रै सार्वजनिक गरिएको हो । भिडियोमा रुचाईएका निर्देशक सुरेन्द्र बसेलको निर्देशनमा तयार ‘मुटु चिनेर’मा मोडलद्धय अर्जुन न्यौपाने र गीता ढुंगानाको अभिनय रहेको छ । अर्जुनले यसअघि ‘जाले रुमाल बैना’, ‘रोगै पिरतीको’ जस्ता ...
पाल्पा । पाल्पा जिल्लाको एकमात्र चलचित्र हल ‘सन्तोष चलचित्र मन्दिर’ यतिबेला बन्द अवस्थामा छ । सदरमुकाम तानसेनको बिशालबजारमा रहेको हलको बाहिरी भित्तामा थोत्रा पोष्टरहरु छन् । पोष्टरमा दयाहाङ राई र बुद्धी तामाङको अनुहार देखेर अनुमान लगाउन सकिन्छ, त्यो ‘सेन्टीभाइरस’ चलचित्रको पोष्टर हो । यो चलचित्र कोरोना महामारी फैलिनुअघि प्रदर्शनमा आएको थियो । त्यसले प्रष्ट हुन्छ, त्यसयता हलमा कुनै अर्को चलचित्र प्रदर्शनमा आएका छैनन् । कोरोना महामारीयता चलचित्र क्षेत्रमा संकट आएपछि धेरै सिं...
पाल्पा । किरण चित्रकार । चिनिसक्नुभयो है ! पाल्पालीले उनलाई चिन्न धेरै सोँच्नु नै नपर्ला ! ‘ए, बसपार्कको होटलवाला दाई’ कतिले उनलाई रेष्टुरेष्ट व्यवसायिका रुपमा चिन्लान । ‘कलाकार किरण चित्रकार’ कतिले कलाकारका रुपमा चिन्लान् । विभिन्न संघसंस्थामा आवद्ध रहेका किरणलाई कतिले समाजेसेवीका रुपमा चिन्लान् । जे होस् जसले जसरी चिनेपनि उनी ब्यक्ति एकै हुन् ।यसरी बहुआयामिक व्यक्तित्वको छवी बनाएर छाएका किरणको पाल्पा सदरमुकाममा आफ्नै नामको रेस्टुरेन्ट छ । किरण श्रीनगर यातायात व्यवसायी...
पुरुषोत्तम गैरे पाल्पाली कलाकार हुन् । बगनासकाली गाउँपालिका –६ यम्घा स्थायी घर भएका गैरे विगत १३ वर्षदेखि सांगीतिक क्षेत्रमा सक्रिय छन् । र, सांगीतिक क्षेत्रबाटै आफ्नो पहिचान बनाईसकेका छन् । ‘बादलमाथि घामकै छायाँ हो’ उनको पहिलो गीत हो, जुन गीत गैरेले गायिका देवी घर्तीसँग गाएका थिए । त्यसयता गैरेको स्वर रहेका एकसय भन्दा बढी गीतहरु सार्वजनिक भैसकेका छन् । ‘बुटवल तनहुँ खैरेनी’, ‘जाले रुमाल बैना’ , ‘पिंजडाको चरी’ केही गीतका उदाहरण हुन् । पछिल्लो समय उनले आफ्नो सांगीतिक सक्रियताला...
पाल्पा । लोकप्रिय गायक एवं सर्जक प्रकाश सपूतले ‘पिर’ गीतको केही दृश्य हटाएर युट्युबमा रि–अपलोड गरेका छन् । उनले माओवादीकी पूर्व लडाकू महिलाले देशव्यापार गर्न बाध्य भएको दृश्य हटाएर शनिबार साँझ गीत रि–अपलोड गरेका हुन् । गीतको पहिलाको भिडियो भने युट्युबबाट हटाएर छन् । जुन भिडियोले नयाँ कीर्तिमानी कायम गर्दै सार्वजनिक भएको ७ दिनमै युट्युबमा एक करोड बढी भ्युज पाएको थियो । सम्बन्धित समाचार एक सातामै एक करोड बढीले हेरे प्रकाशको ‘पिर’ उनले ‘पिर’मा प्रतिकात्मक रु...
पाल्पा । लोकप्रिय गायक प्रकाश सपूतको ‘पिर’गीतलाई युट्युबमा एकसातामै एक करोड बढी दर्शकले हेरेका छन् । अघिल्लो शुक्रबार सार्वजनिक भएको गीतले शनिबार बिहान युट्युबमा १ करोड भ्युज पार गरेको हो । योसँगै यस गीतले युट्युबमा छोटो समयमै एक करोड भ्युज पाउने गीतको रेकर्ड समेत राखेको छ । यसअघि यति छोटो समयमा कुनै पनि गीतले करोड बढी भ्युज पाएका थिएनन् । तीजमा सार्वजनिक विष्णु माझीको ‘चरी जेलैमा’ले १३ दिनमा एक करोड भ्युज पाएको थियो भने त्यसअघि प्रकाश सपूतकै ‘कुरा बुझ्न पर्च’ले १५ दिनमा ए...